TONIA MPAMPANOA LALANA : Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy
Ny talata 20 aogositra lasa teo, nampiantso mpanao gazety tao Toamasina ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina, Rajaonah Thierry Lauret. 21 août 2019
Nanao tsiahy ny zava-nisy momba ilay raharaha 4 chemins Morarano ny 10 aogositra.
Tonga nitady asa tao amin’ny tokantrano iray tao Morarao i Ramatoa kely Ravaonirina Elisabeth. Ity farany izay nahita soratra mitady mpiasa. Raikitra fa 200 000 Ariary isam-bolana ny karama. Ny andron’ny 10 aogositra io ihany. Mialoha ny tena handraisany asa, dia nasain’ny tompon-trano hidio tao anaty efitrano fidiovana aloha izy. Teo no nilazany fa nahita lohan’olona efa maty, ka rifatra nitsoaka izy. Rehefa natao ny fisavana dia tsy nahitana izany lohan’olona maty izany tao amin’ilay tokantrano.
Tsy resy lahatra tamin’izany anefa ireo fokonolona efa vory maro be, ka nitarika fikorontanana sy fikasana hanao fitsaram-bahoaka an’ilay ramatoabe tompon-trano. Voatery niditra an-tsehatra nandamina ny mpitandro filaminana tamin’ny alalan’ny tifi-danitra sy entona mandatsa-dranomasi. Nambaran’ny Tonia mpampanoa lalàna nandritra io valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataony io fa misy endrika fanakorontanana nataon’ilay tovovavy, ka afaka enjehina tsara izy.
Ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina izay manitrikitrika fa tsy marina velively ny filazan’ilay ankizivavy fa nahita lohan’olona maty. Olona 10 no atao famotorana amin’iny raharaha 4 chemins Morarano Toamasina. Raha nanontaniana kosa ny Tonia mpampanoa lalàna ny andro hiakaran’ireo olona folo ireo eny amin’ny fampanaoavana, dia tsy nilaza. Hiditra an-tsehatra ny « Justice et Paix » Re amin’izao fotoana izao fa hiditra an-tsehatra amin’ny fikarohana ny marina ny « Justice et Paix ».
Fantatra rahateo fa mbola misy rohim-pihavanana amin’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré i Ravaonirina Elisabeth.
Efa tonga ao Toamasina ihany koa ireo havan-dRavaonirina avy any Marolambo sy Antananarivo manaraka akaiky ny fizotran’ny raharaha. Raharaha izay arahin’ny vahoakan’i Toamasina akaiky. Maro no tsy resy lahatra amin’ny filazana fa lainga no nafafin’ilay ankizivavy. Ho hita eo ny ho fivoarany.